“Don’t Fear the Internet”: Fijoroana Vavolombelona Momba Ireo Anaran-tsehatra Sy Ny Fahalalahana Miteny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2012 1:10 GMT
Fanamarihana: Navoaka tamin'ny teny Espaniola ny dikanteny tena izin'ity lahatsoratra [es] an'ny Derechos Digitales ity, ary nadikan'i Silvia Viñas.
Elmercuriomiente.cl [“Mandainga ny El Mercurio (gazety)”], Barrickmiente.cl [“Mandainga ny Barrick”], Estafadoscorfo.cl [“Nosolokian'ny CORFO”] , Estoyendicom.cl [“Aty Dicom aho”], sns. Ireo anarana sehatra rehetra ireo dia manamafy ny fahalasanan'i Shily ho tany fiadiana ho an'ny fahalalahana miteny.
Ny anaran'ireo sehatra ireo dia vavahady fidirana , taratasy ampanarahana ny vohikala iray eo amin'ny Aterineto iray manontolo. Mbola mihoatra lavitra noho ny marika, fitaratry ny fanahy iombonan'ireo mpamorona azy izy, ny fironan'ny zavatra ao aminy. Mampisy fandaniana goavana be ho anà tetikasa iray ny fanomezana anaran-tsehatra. Ary araka izany, ny fanaovana adihevitra mikasika izany ka hamafàna ireo votoatin'ilay tetikasa, dia loharano iray tena mahaliana tokoa.
Anatin'ity lahatsary vaovao iray avy ao amin'ny fanentanana “Don’t Fear the Internet” [es] ity, nifantina fijoroana vavolombelona roa izahay: ny elmercuriomiente.cl sy ny estafadoscorfo.cl. Ilay voalohany, iray amin'ireo raharaha vao haingana tao Shily niadiana ny anaran'ilay sehatra – ireo mpianatra nifanandrina tamin'i Agustín Edwards- nikatsahana ny hampanginana ny tsikera manitikitika ny gazety mpitahiry ny nentin-drazana efa mahazatra. Ny faharoa, raharaha vao haingana mbola tsy voavaha hatramin'izao, mampiseho ny mbola fisian'ny hevitra ho fampanginana ireo kiana goavana avy amin'ny alalan'ireo dingana kitoatoa sy boraingina mikasika ny anaran-tsehatra.
Na eo aza izany, ireo mpamorona ireny tetikasa ireny dia tsy nandray ny fiheverana ny Aterineto ho toerana iray tokony hametrahana ho ambony ny adihevitry ny matanjaka. Tsy matahotra ny Aterineto izy ireo: ny mifanohitra amin'izay aza, resy lahatra izy ireo fa toerana iray ho an'ny demôkrasia sy ny fahalalahana miteny ny Aterineto.